Iziko ledatha laseIreland alinakwakhiwa | Ndisuka mac
Oko iApple yabhengeza kwiminyaka emibini eyadlulayo ukwakhiwa kweziko ledatha eIreland, uninzi lwezitshixo lucinezelwe ukwazisa malunga nokwahluka iingxaki eziye zajongana neApple ukuyakha. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, emva kwamadabi ahlukeneyo kunye neAtherny County, apho iApple iceba khona ukwakha eli ziko ledatha, ekugqibeleni ikwazile ukuyifuna phambili, ukuze iqale ukwakhiwa nanini na ifuna.
Kodwa kubonakala ngathi xa sele ikwazile ukufikelela phambili, ngoku yi-Apple ngokwayo engacacanga ukuba ekugqibeleni iza kulakha eli ziko ledatha eIreland, ukuze basebenzise ithuba lemozulu yelizwe, kuba iya kubonelelwa ngamandla ahlaziyekayo, okanye iprojekthi yayo igqithiselwe kwelinye ilizwe, njengeDenmark, apho inkampani ineziko ledatha elisebenzayo kwaye apho sele ifumene ukuqhubekeka ukuqala ukwakha enye.
Kudliwanondlebe athe uTim Cook walunika i-RTE medium, uCook uqinisekisa ukuba okwangoku abazi ukuba imisebenzi yokwakha iziko ledatha laseIreland liza kuqala nini, ekwangqina oko urhulumente weli lizwe angenza nantoni na esemandleni akhe ukuqala kabusha iprojekthi, ethi, njengoko benditshilo ngasentla, ikhubazeke ngokupheleleyo ngoku.
I-Ireland yakhe uqoqosho lwayo ekutsaleni amazwe angaphandleNgapha koko, umsebenzi omnye kwabalishumi uvela kwiinkampani zangaphandle kwaye amaziko edatha lolunye lotyalo-mali olubaluleke kakhulu olunokuthi lwenziwe kwilizwe liphela, kuba ibonelela ngomsebenzi kungekuphela nje ngexesha lokwakhiwa kwalo kodwa nangexesha lokusebenza.
Asazi ukuba isohlwayo i-EU inyanzelise i-Ireland ye-13.000 yezigidi zeerandi, ngokungayiqokeleli irhafu ehambelana ne-Apple kule minyaka idlulileyo. esinye sezizathu apho iApple iya iqhubeka ngokuthe cwaka kurhulumente waseIreland, ngaphandle kokuba ibonakalise yonke inkxaso yayo kwinkampani esekwe eCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziko ledatha laseIreland alinakwakhiwa
Yile nto i-bumpers ijongeka ngayo kwi-Apple Watch yakho